Munyengetero waDhavhidhi. 17 Inzwai zvakarurama, haiwa Jehovha; teererai kuchema kwangu kwokuteterera;+Teererai munyengetero wangu unopiwa nemiromo isinganyengeri.+ 2 Kutongwa kwangu ngakubve pamberi penyu;+Maziso enyu ngaaone kururama.+ 3 Makanzvera mwoyo wangu, makandiongorora usiku,+Makandinatsa; muchaona kuti handina kuruka mazano.+Muromo wangu hauzodariki.+ 4 Kana ari mabasa evanhu,Neshoko remiromo yenyu ini ndakachenjerera makwara egororo.+ 5 Nhanho dzangu ngadzirambire pamakwara enyu,+Pasingazotsvedzemuki tsoka dzangu.+ 6 Haiwa Mwari, ndinodana kwamuri, nokuti muchandipindura.+Rerekerai nzeve yenyu kwandiri. Inzwai zvandinotaura.+ 7 Itai kuti mabasa enyu omutsa worudo ave anoshamisa,+ haiwa imi Muponesi wevaya vanotsvaka kwokupoteraPane vaya vanomukira ruoko rwenyu rworudyi.+ 8 Ndichengetei semboni yeziso,+Ndivanzei mumumvuri wemapapiro enyu,+ 9 Nokuda kwevakaipa vakandipamba.Vavengi vanorwisa mweya wangu vanoramba vachindipoteredza.+ 10 Vakazvifukidza nemafuta avo;+Vakataura vachizvikudza nemiromo yavo;+ 11 Vanotikomba kwose kwatinotsika;+Vanoramba vakatarira kuti vawisire pasi.+ 12 Akafanana neshumba inosuwa kubvambura-bvambura+Nomwana weshumba akagara munzvimbo dzakavanda. 13 Haiwa Jehovha, simukai; nanganai naye chiso nechiso;+Mukotamisei; pukunyutsai mweya wangu pamunhu akaipa muchishandisa bakatwa renyu,+ 14 Haiwa Jehovha, ndipukunyutsei pavanhu noruoko rwenyu,+Pavanhu vari mumamiriro ezvinhu epanguva ino,+ vane mugove muupenyu huno,+Vane matumbu amunozadza nepfuma yenyu yakavanzwa,+Vanogutswa nevanakomana+Uye vanochengetera vanakomana vavo zvavanosiya.+ 15 Asi ini ndichaona chiso chenyu mukururama;+Ndichagutswa pandinomuka kuti ndione mufananidzo wenyu.+